Olee otú iji tọghata MTS ka ProRes ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata MTS ka ProRes
Ndị ọrụ chọrọ dezie MTS vidiyo na Final Cut Pro-emekarị na-agba n'ime incompatibility nke. Ma ọ bụ na-apụghị dezie ha were were mgbe na-ewere ụfọdụ oge maka importing MTS ka FCP. N'ihi gịnị? Nke a bụ n'ihi na MTS videos, nke na-ama na ukwuu abịakọrọ site H.264 codec, dị nnọọ siri ike obibi n'oge video edezi. ProRes, a lossy video mkpakọ format na mepụtara Apple Inc., bụ a kwesịrị ekwesị usoro maka ire ụtọ edezi na Mac. N'ihi ya, mgbe ị na-enweta ọtụtụ MTS videos na chọrọ dezie ha na Final Cut Pro, iMovie, ma ọ bụ Adobe Premier, ọ bụ ka mma-uru nke ProRes codec.
Iji tọghata MTS ka ProRes ọsọ ọsọ na mfe, Video Converter Ultimate for Mac ukwuu tụrụ aro. Nke a na usoro atụmatụ elu arụmọrụ na enweghị nkebi akakabarede. Na ya, i nwere ike ime ogbe akakabarede si AVCHD, MTS, AVI, VOB, MP4, MOV, na ndị ọzọ na-ProRes dị mfe clicks nke òké. A bụ otú ime ya.
Free download MTS ka ProRes Ntụgharị ikpe version:
1 Tinye MTS faịlụ ka MTS ka ProRes Ntụgharị
Pịa "+" button ịnyagharịa gị nchekwa wee họrọ MTS faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. (Cheta na: ogbe akakabarede na-akwado, otú ị pụrụ Ibu Ibu ihe karịrị otu faịlụ ịzọpụta oge.)
Ma ọ bụrụ na gị MTS faịlụ ndị na gị camcorder, i kwesịrị ikwunye na ngwaọrụ gị Mac mbụ, na mgbe ahụ na-agba ọsọ a usoro. Nke a na usoro ga-egosi gị camcorder faịlụ na ya interface. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ, pịa "Ibu Ibu" bọtịnụ tinye ha.
2 Họrọ ProRes dị ka mmepụta format
Pịa format icon ikpughe mmepụta panel. Wee họrọ "edezi" Atiya ịhọrọ gị chọrọ usoro. Ị ga-ahụ ọtụtụ ProRes formats na-nyere. N'ozuzu, ProRes ma ọ bụ ProRes lt ndị kwesịrị ekwesị nhọrọ maka MTS, M2TS, DV videos gbara na camcorders. ProRes HQ bụ na-emekarị n'ihi na film dabeere isi iyi media.
Atụmatụ: Mgbe ị na-ahọrọ ProRes 422 ọkọlọtọ ma ọ bụ lt format, ị ga-ahụ Target faịlụ oge, mkpebi, na faịlụ size-egosi na ahụ n'akụkụ aka nri nke onye ọ bụla video clip. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike pịa gia na akara ngosi na n'elu aka nri nke format ụdị ị họọrọ ka ịhazie parameters aka.
3 Malite converting MTS ka ProRes
N'oge a, ị nwere ike ịgbanwe mmepụta filename ma ọ bụ mmepụta ụzọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-eche na afọ ojuju na nhọrọ gị, Dị nnọọ see tọghata button iji rụọ ọrụ MTS faịlụ ka ProRes akakabarede. A mmemme ukwuu oru oma n'ihi na ọ na sikwuo na CPU na GPU (30X ngwa ngwa). Na a mma n'anya usoro mmanya ga-egosi na pasent na fọdụrụ oge.
Mgbe niile conversions dechara, ị ga-enweta a mmapụta mara. Dị nnọọ pịa "Open nchekwa", i nwere ike ngwa ngwa chọta ebe gị converted faịlụ na-azọpụta.
Tọghata MTS ka AVI: Wondershare MTS Ntụgharị-enye gị ohere iji tọghata MTS ọ bụla audio / video format ma ọ bụ ngwaọrụ wdg
Tọghata MTS ka MP4 na Mac / Win: Nke a ndu-akụzi gị otú iji tọghata MTS ka MP4, otú i nwere ike na-egwu MTS na ụfọdụ na-ewu ewu ngwaọrụ ma ọ bụ egwuregwu.
Free download MTS ka ProRes Ntụgharị:
Olee otú Tinye Logo ka Video ọsọ ọsọ na mfe